Uma owesifazane othanda indoda, bese efuna kube yinzuzo kuye. Futhi umbhede - enye yezindlela esemqoka ukuba kufakazelwe. Ukuletha injabulo indoda ngesikhathi socansi kungaba ngezindlela ezihlukahlukene. Ingase futhi yokususa yokujama tsi ebuhlotsheni niwalethe into entsha. Ngempumelelo kanye ezinhle ekuphileni ubulili evumela abesifazane ukukhulisa yabo ukuzethemba. Futhi uma naye uyazi ukuthi angalenza kanjani indoda ethanda, yimuphi ummeleli wobulili namandla kuye.
ukuphefumula Proper - isikhali esiyinhloko yowesifazane. Kodwa kubalulekile ukuba acabangele ukuthi wonke umuntu othanda into ethize. Othile engena ecstasy ka uyabubula entanyeni noma emahlombe, futhi abanye abantu bathanda ukulalela indlebe ethule ukuphefumula sowesifazane. Ngakho ungesabi ukuba ulinge. Zizwe ukhululekile ngiyagquma futhi ukuveza imizwa yabo. Ngakho indoda kuyoba sobala ukuthi ujabule.
Eqinisweni, asikho isidingo sokuthi uqale ukuya ocansini. Sokulinda kokhela hhayi buthaka yesenzo socansi. Ngakho qala nge imilayezo ye-SMS ukudlala. Khumbula, njengoba nje obukade imiyalezo njengoba bejabule zonke izindaba ukulinda. Ungakwazi hang endlini eshiya izizathu esohlwini kungani uthande omunye umuntu. Lokhu kungakwazi nokukhumbuza kuye futhi mayelana inkathi ubuhlobo bakho uma ayeseqala nje. Bese ungakwazi udlulele indlela yokwenza umuntu nice embhedeni. Lokhu uzokutshela ngaphezulu.
Ngakho, indlela yokwenza umuntu nice embhedeni, uma baye bazama konke abangakwenza? Eqinisweni, ungahlala uguqule ubulili bakho. Ukuze uqale ukuthenga elihle Lingerie isethi. Zinike isikhathi uya ezitolo ubulili, izingubo ezivusa inkanuko yobulili ithengiswe khona. Aphuce zone obuseduze. Ungenza nezinwele noma ukudweba pubic. Ngisho isenzo esincane angakhuthaza indoda yakho ukubheka ngendlela entsha ngawe.
Indlela yokwenza indoda yamjabulisa ngqo ngesikhathi socansi? Qala nge massage ukukhanya. I ubulili namandla njengo nokuzwakala ethintekayo. Ungasebenzisa imali encane yamafutha ebalulekile ylang-ylang - ithuthukisa sokuhlaselwa inkanuko yobulili. Qala nomunye ingxenye yomzimba, bese kancane kancane sidlulela kwenye.
Ukuze uqonde ukuthi ukwenza indoda ubumnandi ocansini, ungesabi ukuba ulinge. Ngezinye izikhathi kubonakala sengathi kunzima beveza into entsha ubulili bomlomo. Eqinisweni, ngokwanele ukumpotopotoza wenduku konke ngaphandle ulimi. Ngokwesibonelo, ukusebenzisa izandla zakho, izinwele noma usilika iribhoni.
Ekuseni ungakwazi uvuke indoda ayivelanga kwewashi ayiphulule futhi wanga. Lokhu Awakening akuyona kuphela kujabulise, kodwa futhi esimnandi kakhulu. Sitshele ukuthi yini wena ngiphupha iphupho esikisela ucansi nge iqhaza lakhe. Ungagxambukeli, futhi massage ukukhanya. Pheka ukudla kwasekuseni futhi ozithandayo yakhe isidlo wakhonza embhedeni. Hhayi abesifazane kuphela abathanda izinto romantic.
Ungakwazi ngimvuse nomona. Futhi akudingeki ukuba demonstratively bamukele nenye indoda, ukuwotawota wema kanye naye anele. Yazisa kuveza yakho esibukweni, kakhulu uzitshele izilokotho. Ukushaya indlwabu inikeza ithuba nje kuphela ukubazi kangcono emzimbeni wakho, kodwa futhi ukuze zidonse ukunaka kwanoma uzakwethu.
Futha aphrodisiac ukusiza lokukhumbula imizwa yobulili esiyingqayizivele
Loch - ngubani lokhu noma lokhuya?
Engu-25 ngomshado - sibalo ezinkulu
Yanyanga zonke ngesikhathi ibele: izimbangela kanye nezici